Finoana avy amin’Andriamanitra
"Ary ny anankiray finoana, amin 'izany Fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana." 1 Kor. 12:9.
Fanomezana avy amin 'Andriamanitra ny finoana. Ny finoana no faneken'ny sain'olombelona ny tenin'Andriamanitra, ka mamatotra ny fo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary an'iza ny sain'olombelona, raha tsy an'Andriamanitra? An'iza ny fo, raha tsy an'Andriamanitra? Ny hoe manam-pinoana dia mamerina amin'Andriamanitra ny fahaizana sy ny tanjaka izay noraisintsika avy taminy. Noho izany, ireo izay manam-pinoana dia tsy mendrika ny hahazo dera akory. Ireo izay mino mafy an'ilay Ray izay any an-danitra dia afaka ny hatoky Azy amin'ny fahatokiana tsy misy fetra; ireo izay afaka hihoatra ny fasana ka hanakatra ny zava-misy mandrakizay amin'ny alalan'ny finoana, dia tsy maintsy manandratra amin'ny Mpanao azy ity fiaikena ity: "Fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy tamin'ny Anao ihany no nanomezanay Anao" - 1 Tant. 29:14.
Tsy misy olona manan-jo hiantso ny tenany hoe azy manokana. Ary tsy misy olona manana zavatra tsara afaka miantso izany ho fananany manokana. Ny olona tsirairay, ny zavatra tsirairay dia fananan'Andriamanitra. Mbola an'i Jehovah avokoa ny zavatra rehetra izay raisin'ny olona avy amin'ny hatsaram-panahin'ny lanitra. Na inona na inona fahalalana izay mety hanampy azy mba hahatonga azy ho mpiasa mahay eo amin'ny asan' Andriamanitra, dia avy amin'i Jehovah, ka tokony hampitainy amin' ireo namany mba hahazoan' izy ireo ho tonga mpiasa manan-danja ihany koa. Izay nanankinan'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana tsy dia fahita dia tokony hamerina izany ao amin'ny trano firaketan' i Jehovah amin'ny alalan'ny fanomezana maimaimpoana ny hafa ny tombontsoan'ny fitahiana azony. Amin'izay dia omem-boninahitra sy ankalazaina Andriamanitra. (...)
Tsy natao hanompo tanjona feno fitiavan-tena ireo fahaiza-manao narotsaky ny lanitra. Ny tanjaka tsirairay, ny hakingana tsirairay, dia talenta izay tokony hanandratra ny voninahitr’Andriamanitra ka ampiasaina ho amin'ny asa fanompoana Azy. Tokony hapetraka any amin'ny mpanana vola ny fanomezana avy Aminy, mba hahazoany maka ny Azy, miaraka amin'ny zana-bola. Ny talenta izay mahamendrika ny olona ho amin'ny fanompoana dia nomena azy, tsy ny hahatonga azy ho mpiasa azo ekena fotsiny ihany, fa mba hahazoany koa mampianatra ny hafa izay tsy manana izany talenta izany.- RH, 1 Des. 1904.